सुष्मालाई मध्यरातमा एक रातको १ लाख रुपैयाँ दिन्छु ‘प्लिज’ भनेपछि ……. – Bisal Chautari
सुष्मालाई मध्यरातमा एक रातको १ लाख रुपैयाँ दिन्छु ‘प्लिज’ भनेपछि …….
- ८ फाल्गुन २०७४, मंगलवार ०९:४० मा प्रकाशित
पोखरा , २०७४ फाल्गुन ८ गते मंगलबार । सेक्स प्राकृतिक आवश्यकता हो । जसको बारेमा हाम्रो समाजमा खुलेर कुरा गरिँदैन । सेक्स काम भन्दा बढी कुराको बिषय बन्ने गरेको छ । त्यसैले यसको बारेमा अझ बढी उत्सुकताका साथ लुकेर यसको अध्ययन गरिको पाइन्छ ।
केही समययता नेपाली चलचित्रकी हट नायिकाको सूचीमा परेकी सुष्माका जति पनि समाचार बने, संयोगवश ती सबै यौनकै वरिपरि रहेका छन्। उनी आफ्ना बारेमा कमेन्ट गर्न चाहादैनन् र त्यो त अरूले गर्ने हो भन्छिन्।